Rano mangatsiaka fitotoana tsy misy fitahirizana China Manufacturer
Description:Rano mangatsiaka rano,Fangatsiahana ranoka tsy misy fitahirizana,Fangatsiahana ranon-tsolika misy menaka mineraly
Home > Products > Fiarovana amin&#39;ny fluoro-karbônina > Kilaometatra ho an&#39;ny mpanodina Wind Turbines > Rano mangatsiaka fitotoana tsy misy fitahirizana
Model No.: TUWF-610D2
Fantsim-panafody Fluorocarbon , manana fisitrihana elektrika tsara, ary fantsom-pifandraisana avo lenta, lehibe kokoa noho ny 55KV.
ity andiany ity dia ranoka Perfluorated tsy manam-paharoa , izay misy famerenana dielectric avo, fahalemana 1,62g / ml
, Ny vahaolana fluoride dia azo ampiasaina betsaka amin'ny rafitry ny hatsiaka fananganana faritra ao anaty mpanamboatra rivotra
Ny mampiavaka ny vera ho an'ny mpamokatra turbine rivotra :
* Ny fitrandrahana herinaratra tsara, ny volavolan-tsolika avo lenta amin'ny 40KV;
* Ny inertia simika mety ary azo ampiasaina amin'ny fotoana fandroahana hafanana mifehy ny hafanana;
* Ny teboka mangotraka dia somary faran'izay malefaka. Misy ny fanalefahana amin'ny alàlan'ny fiasa, izay manafana ny hafanan'ny hafanana amin'ny fiatrehana, noho izany dia manome antoka tsara ny fiasan'ny fantsom-batana;
* Rivotra ho an'ny mpamokatra turbines rivotra dia entana tsy mampidi-doza, tsy flammable ary tsy mipoaka, tsy misy kitay ary teboka tselatra;
* Alefaso tsara, maso ambany noho ny rano mazava; Afaka mikoriana tsara sy manala ny hafanana ao amin'ny rafitra fanaraha-maso ny hafanana;
* Vahaolana amin'ny fluorida dia Nontoxic, tsy mampidi-doza, tsy milamina;
* Sariaka ny tontolo iainana, manana ny sandan'ny ODP amin'ny 0 ary ambany ambany indrindra amin'ny sandan'ny GWP
Ny marika fizika mikorokosin'ny Afo Fluorocarbon:
Fahafahana mangatsiaka Fluorocarbon mampiasa:
Ity andiana vokatra ity dia tsy ampiasaina amin'ny haitao mahazatra amin'ny hafanana mifehy ny mari-pana
Ity andiany andiany ity dia feno miaraka amina 25kg / barika, na natao ho fanao amin'ny mpanjifa.
Product Categories : Fiarovana amin'ny fluoro-karbônina > Kilaometatra ho an'ny mpanodina Wind Turbines
Safo-drano mangatsiaka rano tsy misy mpankafy Contact Now
Fahafo-tsiranoka azon-tsasatra ny tsiranoka Xiaomi Black Shark Contact Now
Xiaomi Xeon Contact Now
Fangatahana rano amin'ny alàlan'ny Rafitra mpiorina Xeon Contact Now
Fandotoana elektrika amin'ny famonoana elektrika Contact Now
Rano mangatsiaka Fluorine vs Fankafy Contact Now
Fampihenan-tsaka ny fampiasana UK Contact Now
Fangatsiahana mampiasa ranon-javatra ampiasaina ao amin'ny turbin-drivotra Contact Now
Rano mangatsiaka rano Fangatsiahana ranoka tsy misy fitahirizana Fangatsiahana ranon-tsolika misy menaka mineraly Rano mangatsiaka Vs rano Feo mangatsiaka rano Rano mangatsiaka Rano mangatsiaka Xeon Rano mangatsiaka kokoa